संविधान हलो कि मुङ्ग्रो ?
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल- -
‘गल्ती भयो भन्दैमा पश्चातापमा नडुब्नुहोस्, त्यसलाई सुधार्न र सतर्क हुनेतर्फ लाग्नुहोस् । आफनो गल्तीहरु नसुधार्नेले कहिल्यै सुख पाउँदैनन् तर फरक यत्ति हो कि एउटै गल्तीमा पटक पटक फस्नु मूर्खको लक्ष्यण हो ।’ कुनै विद्वानले भनेका यी वाक्यहरु यतिबेला नेपाली राजनीतिमा गला लागेका छन् ।
हामीले गल्ती गरेका छौं कि छैनौं ? हामी गल्ती सुधार्नतिर लागेका छौं कि पश्चाताप गर्नेतिर ?
८ वर्ष लगाएर संविधान जारी गरियो र त्यो पनि फास्ट ट्य्राकबाट । ८ वर्ष हतार नहुने, जारी गर्ने बेलामा यति हतारो किन भएको होला ?
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा विदेशी लगानी भएको थियो र उनीहरुले लगानीको प्रतिफल उठाउन हतार गरेकाले संविधान पनि हतारोमा जारी गरिएको हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा कमजोरी देखियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरुमा पनि कमजोरी देखियो । यो कमजोरी सुधार्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम्तुष्टि गर्नका लागि संविधानलाई विवादको जाँतोमा घून पिसेझैं पेल्ने काम भएको देखिन्छ । संविधान सवल हुँदो हो त कुनै पनि विवादको टुङ्गो संविधानले लगाउनु पर्ने थियो । यतिबेला संविधान हलो हो कि मुङ्ग्रो ? को अवस्थामा छ ।
लिखित संविधान नभएको बेलायतमा पनि प्रजातन्त्र मजाले चलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता भनेको प्रजातन्त्र सञ्चालकहरुमा लोकलज्जा अर्थात नैतिकता हुनुपर्ने रहेछ । लज्जा नभएपछि संविधान कसरी कागजको खोस्टो बन्छ, त्यसको ताजा उदाहरण नेपालको संविधान हो ।
भनिन्छ, संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र संविधान सिरानमा राखेर सुत्न सकिने पवित्र ग्रन्थजस्तो हुनुपर्छ । नेपालको संविधान त जारी हुनासाथ जलाइएको संविधान हो । कतिले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय पार्टीहरु यही संविधानको शपथ खाएर सत्तामा गएका छन् र यो संविधानलाई कालो संविधान पनि भनिरहेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, संवैधानिक संकट बढ्यो । संविधान जारी गर्ने र ठूला ठूला संविधानविददेखि शासकसम्म भनिरहेका छन्– संविधान संकटमा प¥यो, नचिताएका घटनाक्रम हुनसक्छन्, यसरी संविधान चल्दैन, शासन व्यवस्था पनि चल्दैन । अर्थात संविधानले काम गरिरहेको छैन ।
सर्वोच्चमै मुद्दा परेको छ । संविधानविदहरु पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् र बहस कम राजनीतिक लविङ् बढी गरिरहेजस्ता देखिन्छन् भनेर आमधारणा बोलिरहेछ । अदालतमा बोल्नुपर्ने संविधान, बोल्छ राजनीतिक स्वार्थ भने यस्तो संविधानले कसरी देश अघि बढ्नसक्छ ।
संविधान जारी गर्दाका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले भनेका छन्– संविधानलाई संकटमा फसाइयो ।
संविधान जारी गर्दाका सभामुख सुवाश नेम्वाङ् भन्छन्– प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा कसले पु¥यायो । स्थिति साह्रै नाजूक छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संविधानलाई संकटमा पार्नु हुनेथिएन, पारियो । अब अदालतले जे फैसला गर्छ मान्य छ भनिरहेको छ । अर्थात संविधानलाई नेकपाका नेताहरुको गुटबाजीको सिकार बनाइएको छ । देश एकपल्ट फेरि संकटमा छ र यसको निकास जसरी गरे पनि प्रजातान्त्रिक नै हुनुपर्छ ।